WiFiMan inowanika mahara kwenguva pfupi | IPhone nhau
WiFiMan inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei
Tichifunga nezvekushomeka kwenhau dzine chekuita nezvezvinoitika zvakapoterera nyika yeApple, mu iPhone News hatisi kuzomira kunyora nhau, ndosaka tiri kutarisa pakuratidza matsva kana maapplication ayo anova emahara kwenguva shoma. Mazuva mashoma apfuura ini ndakaburitsa akati wandei ezvinyorwa zvandakakuzivisa iwe nezve chishandiso PDF Mafomu and the Tinya Chiremba, ese mahara kwenguva pfupi.
Nhasi iko kutendeuka kweiyo WiFiMan application, kubva kunogadzira DataMan. WifiMan iko kunyorera neakareruka mashandiro anotibvumidza isu track data data kubva kune yedu iPhone uye Apple Watch. Kutenda kune chaiyo-nguva nhamba uye fungidziro dzakangwara, hatife takafanira kunetseka nezve yedu data rate zvakare.
Semazuva ese, kana iye mugadziri akatipa zvimwe zvekushandisa mahara, hatife takaziva kusvikira riinhi saka nekukurumidza patinotora iko kunyorera zvirinani, kana tichida kutora mukana weiyi-yakatemwa kupihwa. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose we 3,99 euros muApp Store.
WiFiMan main maficha
Chengetedza kushandiswa kweWiFi kwe iPhone yedu nePadad.
Statistics munguva chaiyo.
Manage akawanda WiFi kubatana.
Mikana yekutarisa iyo WiFi data inoshandiswa neese SSID yatakabatanidza.
Tinogona kuwedzera widget kunzvimbo yekuzivisa kuti tione huwandu hwe data ratakashandisa mukati mezuva.
Tumira kunze manhamba ekushandisa kuti uongorore nemamwe mafomu.
Maverengero edu ekushandisa haana kutengeswa.
Kuti ushandise iyi application, zvinodikanwa vane angangoita iOS 9.0. WiFiMan inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata. Inowanikwa muChirungu uye chiChinese chakareruka, asi sezvandambotaura pamusoro, mashandiro acho akapusa zvekuti hatizodi ruzivo rukuru rweChirungu kuti tikwanise kushandisa chishandiso ichi.
WifiMan kubva kuDataMan3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WiFiMan inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei
Tricks kuti uwane zvakanakisa kubva paWhatsApp pane yako iPhone (2/2)
Dzivirira makungwa neAngry Birds 2 yakasarudzika edition WWF